Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKWIKWỌ ASIAN Henrikh Mkhitaryan Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; 'Micki'. Henmụaka nke Henrikh Mkhitaryan Akụkọ ya na akụkọ na-enweghị isi akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Ex-Man U na Arsenal kpakpando gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere egwu egwu Henrikh Mkhitaryan ma nyere aka mana mana ole na ole na-ele ndụ ya anya n'èzí pitch nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka anyị bido.
Henrikh Mkhitaryan Nwatakiri Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Henrikh Mkhitaryan na 21st nke Jenụwarị 1989 na Yerevan, isi obodo Armenia na ndị nne na nna - onye bụbu onye egwuregwu bọọlụ, Hamlet Mkhitaryan (nna) na Marina Taschyan (nne).
N’afọ 1989, mgbe ọ dị naanị ọnwa ole na ole, ndị ezinụlọ ya kwagara Frans n’ihi ọgba aghara ụfọdụ na-ada n’Armenia. Nna ya gbara afọ ise maka Valence na ngalaba nke abụọ nke France.
Dị ka Henrikh si kwuo ..“Mgbe m dị afọ 4, ana m ebe ákwá mgbe ọ bụla papa m ga-aga ọzụzụ klọb. Kwa ụtụtụ m ga-asị, 'Papa, kpọrọ m ka ị bịa. Biko, kpọrọ m soro gị! '
N'oge ahụ, echeghị m mmasị n'egwuregwu football, m chọrọ ka mụ na papa m nọrọ. Ma ọ chọghị ka ọ dọpụ uche ya n'oge ọzụzụ site n'ichegbu onwe m banyere m na-agba ọsọ, n'ihi ya ọ bịara jiri amamihe gbagọrọ m. Otu ụtụtụ, agwara m, 'Papa, kpọrọ m ka m zụọ.'
O wee sị, 'Mba, mba. Enweghị ọzụzụ taa, Henrikh. Aga m aga ụlọ ahịa. Aga m alaghachi azụ. ' Ọ gbabara ọzụzụ, echekwara m ... ma chere. Ọ laghachiri n'ụlọ mgbe awa ole na ole gasịrị. Enweghị akpa nri. Enwuru m ya. Amalitere m ibe ákwá.
'You ghaara m ụgha! Gaghị ụlọ ahịa! Went gara ịgba bọl! '
Papa ya mere nke a site na iwepụ obere Henrikh iji lee ọrụ snow nke ọ hụrụ n'anya dịka nwatakịrị.
Son Heung-min Storymụaka Akụkọ gbasara Ihe Na-adịghị Eke Ndụ
Site kwa ụbọchị ahụ gaa n'ihu, Hemlet malitere ịkpọrọ nwa ya nwoke gaa ọzụzụ ọzụzụ. N'oge na-adịghị anya, Henrikh malitere ịhụ football n'anya wee malite ịgbaso nzọụkwụ nna ya ka ọ na-ele ya ka ọ na-azụ.
Achọrọ m ịghọ ndị na-agba ụkwụ ma na-ekele ndị mụrụ m, bụ ndị nyeere m aka ịghọta nrọ a. "
Ndi nne na nna ya choro ka ha kwadoro ya ma ha kwusiri ike na akwukwo ihe kwesiri ka ha buru umuaka. Miki mụtara otú e si ejikọta ma agụmakwụkwọ ma football na ụzọ kachasị mma. O tolitere na-eto eto.
Henrikh Mkhitaryan Biography - Na-ewu Onwe Ya Maara Aha Akụkọ:
Ọ mụtara football site na nna ya Hamlet onye bụ onye ama ama n'oge ya na 1908s. O di nwute, ọnwụ mbido nna ya metụtara ya nke ukwuu (Nkọwa banyere ọnwụ ya tụlere n'oge na-adịghị anya n'isiokwu ahụ).
Henrikh chere na ọ bụrụ na nna ya ka dị ndụ, “Ihe niile ga-adị iche.”
N'okwu ya, “N’afọ mgbe nna m nwụsịrị, amalitere m ịzụ bọl. Ọ bụ ụgbọala m, ọ bụ arụsị m. Agwara m onwe m, aghaghị m ịgba ọsọ dị ka ya. M ga-agba dị ka ya. ”
Gị, nna ya nyere ya ndụmọdụ bara uru site n'echiche ọkachamara tupu ya anwụọ. O nwere ike ịnụ ụtọ nna ya naanị afọ 7. Papa ya nwụrụ mgbe ọ dị naanị 7.
Ndị lere Mkhitaryan na nna ya anya, na-ekwu na ụdị ha dị iche na ibe ha. Miki kwuru otu oge, "Ekwere m na ọ na-ahụ m ma na-etu m isi"
Mgbe Henrikh laghachiri na Yerevan si France, ọ marala ọrụ ọ chọrọ ịchụ. Mkhitaryan sonyeere FC Pyunik nnukwu ụlọ ọrụ Yerevan na 1995. Mgbe ahụ, ọ hụrụ onwe ya na-emepe emepe n'ime otu n'ime ndị egwuregwu kachasị egwu.
Henrikh Mkhitaryan Ndụ Ezinụlọ:
Ezinụlọ ya dum nwere ntọala na football football. Mgbe ya na nna ya nwere ihe ịga nke ọma n'ọhịa, ụmụ nwanyị nọ n'ezinụlọ ya ejirila ndụ ha biri. Ugbu a, ka anyị kwuo banyere ha;
NME: Hamlet Mkhitaryan, nna Henrikh bụ onye a na-akwanyere ùgwù na nke a ma ama FC Ararat Yerevan n'oge 1980s. Ọ bụ obere ma dị ngwa ngwa striker. Soviet agha magazine kwanyeere ya ugwu “Onye Mmegide Dị Nso” ihe ngosi na 1984.
Ya na ezinụlọ ya biri n'otu oge Kentron Mpaghara nke Yerevan, nke dị nso na Amaia Hrasdan Stadium.
Ryo Miyaichi Nwa akwukwo akụkọ karia ihe omuma
Ndị hụrụ ma Hamlet na Henrikh egwu na-ekwu na ụdị ha yiri ibe ha nke ukwuu. N'ụzọ dị mwute, Hamlet nwụrụ site na ụbụrụ ụbụrụ mgbe ọ dị afọ 33 mgbe Henrikh dị afọ asaa.
Nke a bụ akụkọ sitere n'aka Henrikh na ọnwụ nna ya.
“Oge mụ na nna m ga-aba ezigbo uru, mana ọ ga-abụkwa obere oge. Mgbe m dị afọ isii, papa m na mama m gwara m na anyị laghachi Armenia. Aghọtaghị m ihe na-eme.
Papa m akwụsịla ịgba bọl, ọ nọkwa n’ụlọ mgbe niile. Amaghị m, ma nna m nwere akpụ ụbụrụ. Ihe niile mere ngwa ngwa. N'ime otu afọ, ọ pụọ.
N'ihi na m dị obere, aghọtachaghị m ihe ọnwụ bụ. Echetara m mgbe m hụrụ mama m na nwanne m nwanyị tọrọ m mgbe nile na-ebe ákwá, m ga-ajụkwa ha, "Olee ebe nna m nọ?" Ọ dịghị onye nwere ike ịkọwa ihe na-eme.
Kwa ụbọchị, ha malitere ịgwa m ihe merenụ. Echetara m nne m na-asị, 'Henrikh, ọ gaghị anọnyere anyị ma ọlị.' Echere m, Ọ dịghị mgbe? Ọ dịghị mgbe ọ dị ogologo oge mgbe ị dị afọ asaa.
Ọ gara n'ihu…
I nwere ọtụtụ vidio vidiyo ya na-egwu na France, m ga-elele ha anya oge niile iji cheta ya.
Abụọ, ugboro atọ n'izu, m ga-elele egwuregwu ya, ọ ga-enyekwa m nnukwu ọ happinessụ, ọkachasị mgbe igwefoto gosipụtara ya mgbe ọ na-eme ihe mgbaru ọsọ ma ọ bụ na-amakụ ndị otu ya.
Na vidio ndị a, nna m bi na ya. kwuru Henrikh Mkhitaryan
Nne: Nne ya Marina Taschyan were ọrụ nke nna na nne mgbe Henrikh nwụsịrị nna ya.
Dị ka ya ..“O siiri m ezigbo ike n'ihi na nne m kwesịrị ịbụ nne na nna nye m. O siiri nne ike ime nke a n'obodo. Ọ ghaghị ịrapara n'ahụ m, ma na-esikwa m ike mgbe ụfọdụ dị ka nna ga-adị.
Enwere m ụbọchị mgbe m na-alọta ọzụzụ wee sị, 'Ah, o siri ezigbo ike. Achọrọ m ịkwụsị. '. Nne m ga-asịkwa, 'Ị kwụsịghị. Ị ga-anọgide na-arụ ọrụ, ọ ga-aka mma echi.'
Mgbe nna m nwụsịrị, mama m ga-arụ ọrụ iji kwado ezinụlọ anyị. Ntre enye ama ọtọn̄ọ ndinam utom ke United States.
Marina Taschyan bụ onye isi nke ngalaba ndị otu egwuregwu bọọlụ na Armenia Football Federation ruo ugbu a.
Henrikh Mkhitaryan kekọrịtare nne ya foto na nne ya na Twitter iji mee ememme ụbọchị ọmụmụ nne ya. Na post, o kwuru,
"Myhụnanya mama bụ ihe dịka ụwa, obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ, nne". Ọtụtụ n'ime ndị na-eso ụzọ ya echeghị na ọ bụ nne ya. Nke a bụ n'ihi na ọ dị nnọọ obere.
SISTER: Nwanne ya nwanyị na-arụ ọrụ na isi ụlọ ọrụ UEFA. Ọ na-enwe mmasị ịkpata ihe ọ na -eri. Gị Miki mgbe ụfọdụ na-enyere ya aka n'ụzọ ego nke ọ na-ajụkarị. N'ajụjụ ọnụ,
ọ gwara ya n'okwu ya…Ọ dịghị ihe dịka 'nke gị na nke m'. Anyị bụ ezinụlọ, ihe niile anyị na-akpata bụ nke anyị ”.
Micki na Monika na-akọrọ obi ụtọ na-echeta ncheta nwata. Ha abụọ dị nnọọ mma dị ka a hụrụ na foto dị n'okpuru ebe a.
Nwa okorobịa Henrikh (n'aka ekpe) na Monika (n'aka nri)
Henrikh Mkhitaryan Lifehụnanya Ndụ:
Henrikh Mkhitaryan bụ nwoke nwa agbọghọ ọ bụla ga-achọ ịlụ… Agbanyeghị, ụmụ agbọghọ, egbula ọsọ ịdabere na ya - Henrikh enweghị oge maka ha! Ma ugbu a ma ọ bụ n'ọdịnihu dị nso.
Mkhitaryan (n'oge ọ na-ede Bio ya) lekwasịrị anya n'ọrụ ya ma ọ bụ di na nwunye. Ọ chọghịkwa ịhụ onye ọ bụla n'anya ruo mgbe ọ ruru afọ 30 nke kachasị kwuru.
Gị na ọtụtụ ndị enyi nwanyị hụrụ gị. Anyị na-ekwenye na o juru gị anya na ọ nweghị nwunye
Henrikh Mkhitaryan Untold Biography Eziokwu - Chess Master:
E jiri ya tụnyere ọtụtụ ndị ọgba bọọlụ nọ na mbara ụwa, ekwuru na Mkhitaryan dị iche. Ọ nwere ikike nghọta ka elu. Ya ọgụgụ isi na pitch nke egwuregwu na jikọrọ ya cheesi nka.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ịhụnanya Henrikh Mkhitaryan maka chess na-edozi ya ọgụgụ isi. O bu ihe ijuanya na o gosiputara ndi ozo ya ugbua n'iguru.
Henrikh Mkhitaryan Biography Eziokwu - arụsị ya:
N'ịbụ onye na-enweghị mgbagwoju anya maka onye na-etiti agha nke na-etolite na France, ihe oyiyi nke football nke Mkhitaryan bụ Real Madrid CF na Zinedine Zidane.
Dabere na Micki…“Mgbe m dị afọ 10, ndụ m niile bụ ịgba bọl. Ọzụzụ, ịgụ ihe, ikiri, ọbụlagodi ịgba bọl na PlayStation. M lekwasịrị anya na ya.
Ahụrụ m ndị egwuregwu okike n'anya - maestros. Achọrọ m igwu egwu dika Zidane na Hamlet. Enwere m ekele maka ụdị egwuregwu Zidane na ihe o mere na pitch.
Ọ dị m ka onye anwansi. Styledị egwuregwu m nke etiti na-emetụta Zidane karịa ka m na-eche banyere ọgụ m metụtara nna m mbubreyo. ”
Henrikh Mkhitaryan Mmụta:
Ezinụlọ Mkhitaryan laghachiri Yerevan, isi obodo Armenia site na France na 1995. N'otu afọ ahụ, Mkhitaryan debanyere aha na Institute of Culture in Armenia.
Ọ gụsịrị akwụkwọ na diplọma ha wee banye ntinye na-amụ ihe akụnụba na mpaghara Yerevan nke Ụlọ ọrụ Petersburg.
Mgbe Miki gụsịrị akwụkwọ, o mekwara atụmatụ ịchụso akara ọzọ na iwu. N'ụzọ dị mwute, nke a emeghị ka ọ dị ya mkpa iji bọlbụ ọkachamara kpọrọkwuo ka ọ kpọọ.
Oge a kara akara nnukwu nrọ na nrọ ya. Ọ hapụrụ ụlọ nwata nwoke FC Pyunik (nke dị na Armenia) wee gaa Ukraine ka ọ kpọọ maka bọọlụ bọọlụ Metalurh Donetsk bụ onye nyere ya onyinye na-enye ezigbo ego ọ nabatara.
Henrikh Mkhitaryan Biography Eziokwu - endingkwụ ụgwọ abalị na klọb nkuzi:
Mkhitaryan Amaara na ọ bụghị mgbe niile ka ọ bi n'ụlọ nke aka ya mana ọ na-anọ ụfọdụ abalị ya na ngalaba ọzụzụ ọgbakọ ya. O meela nke ahụ maka klọb niile ọ gbara.
Mgbe ọ na-agwa panorama akwụkwọ akụkọ Armenia, na February 2017 ọ sịrị, “Ebe ọ bụ na abụrụla m ihe arụsị, ọtụtụ na-elekwa m anya, ọ na-akara m mma ma m lekwasị anya na bọl m ka m wee nwee ike ịmasị ha.
Ọ bụ ezie na ọ pụtara ịnọ ọtụtụ abalị n'ụlọ ọzụzụ maka izu ike. Maka klọb niile m gwuru, achọpụtara m na ndị otu m na-akwa m emo mgbe ha hụrụ omume a n'aka m. Ha gụrụ m Onyeisi [nke ebe ọzụzụ]. ”
Henrikh Mkhitaryan Bio - mmalite nke aha otutu ya:
A kpọrọ aha Mkhitaryan 'Heno ' site na ndị Fans na Armenia. Ọ nakweere aha ahụ nke bụ ụdị dị mkpirikpi nke aha mbụ ya 'Henrikh'. Otú ọ dị, a maara ya na Europe dị ka Micki.
Ndị na-agba ọsọ bọọlụ gosipụtara na N'ajụjụ ọnụ na Nickname bụ aha onye nchịkwa mbụ Borussia Dortmund, Jürgen Klopp. Jurgen kpebiri inye ya aha ahụ mgbe ọ hụrụ aha nna ya 'Mkhitaryan' bụ kwa ogologo ikwu.
Mkhitaryan zara na ọ dị mma iji aha ahụ. Nkwado ikpeazụ nke aha aha ahụ bịara mgbe a hụrụ aha aha ya na nkwenye ya Instagram akaụntụ onye aha njirimara ms micki_taryan.
Ozugbo Egwuru egwu maka Sao Paulo:
Na 2003, Mkhitaryan, agadi 14 nwere ule na São Paulo na Brazil nke mere nke ọma. Ọ na-egwuri egwu maka otu egwuregwu bọọlụ. Otu a nwere mmasị nke Oscar dos Santos Emboaba na Hernanes.
Ọ na-egwuri egwu n'akụkụ ha. Oge ọ nọrọ na klọb ahụ dị obere. Henrikh Mkhitaryan laghachiri Pyunik, ụlọ ọgbakọ Armenia dị na 2004. Ọ bụ onye njikwa ya n'oge ahụ Mihai Stoichiță kwusiri ike na ọ laghachi Armenia.
Henrikh Mkhitaryan Biography Eziokwu - Polyglot:
Mkhitaryan bu polyglot a nwaputara, o nwere ike ikwu ngụkọta nke asụsụ asaa. Asụsụ ndị a gụnyere ndị obodo Armenia, French, Portuguese, Russian, Ukraine, Bekee, na German.
Miki kwuru na ọ bụ nne nne ya, onye maara Russian agbụrụ.
Ọ mụtara asụsụ atọ mbụ (Armenian, French na Portuguese) n'oge ọ bụ nwata, mgbe ọ nọ na nke anọ, ọ kpọọrọ Shakhtar Donetsk na Ukraine, Borussia Dortmund na Germany, na Manchester United na England.
Henrikh Mkhitaryan Award na Charity:
Na 2012, site na mkpebi nke Yerevan City Council, yana n'ihe metụtara ncheta 2794 nke obodo ahụ, e nyere Mkhitaryan onyinye ahụ “Nwa amaala nsọpụrụ nke Yerevan” aha ya, maka nnukwu ihe ịga nke ọma n'egwuregwu football na ihe ndị ọ rụpụtara n'egwuregwu. Mara: Yerevan bụ isi obodo Armenia.
A makwa Mkhitaryan na ala nna ya ka ọ bụrụ onye ọrụ ebere. N'oge ezumike bọọlụ, ọ na-ewepụta oge iji gaa ókèala esemokwu nke mbụ Soviet Union iji nye onyinye maka ezinụlọ nke ndị agha dara ada. Obi ebere ya enwetawo ya onyinye nke 'NKR Medal'.
NKR pụtara (Nagorno-Karabakh Republic). Nke a bụ akara mba nke NKR Prime Minister nyere. A na-enye ya ndị a na-ahụta dịka ndị dike obodo.
Idu ndị otu Armenia National Team:
Mkhitaryan bụ Armenia kachasị nwee goolu, na-etinye goolu iri abụọ na abụọ na egwuregwu iri isii na anọ kemgbe ọ malitere na Jenụwarị 22.
A họpụtara Mkhitaryan ka ọ bụrụ bọọlụ bọọlụ nke Armenia ugboro asaa (kwa afọ kemgbe 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 na 2016). Ọ duru ndị otu egwuregwu n'ọtụtụ n'ime afọ ndị a dị ka onye isi ndị isi.
Na 2012, a hoputara ya dika ihe kacha mma Shakhtar nke oge 2011-12 site na ndi ozo. N'afọ ahụ, a na-akpọkwa ya Onye Premier League nke Premier nke Year.
Nakwa na 2012, akpọrọ Mkhitaryan aha na UEFA si Top 100 egwuregwu site na UEFA European Football Yearbook 2012–13.
Ọzọkwa, a hoputara ya na Commonwealth nke Independent States Footballer of the Year maka 2012, na-eme ka ọ bụrụ onye egwuregwu bọọlụ mbụ nke Armenia ka akpọrọ onye ọkpụkpọ kacha mma sitere na mba Soviet. Ọ natara onyinye ọzọ maka 2013.
Henrikh Mkhitaryan Bio - Atụmatụ Ọdịnihu:
Mgbe ọ bụ nwata, Mkhitaryan na-ekwusi ike na o nweghị atụmatụ ịga n'ihu na-arụ ọrụ na bọlbụ mgbe ọ lara ezumike nká. "Ahụghị m onwe m ka m bụrụ onye nchịkwa, nke ahụ abụghị iko m tii. Achọghị m ka ntutu m na-agbanwe isi awọ na ngwa ngwa! "
Kama nke ahụ, ọ ga-abụ na Mkhitaryan nwere ike ịzụ ahịa football mgbe ọ bụla, nke nwere diplọma si Institute of Culture Physics na Armenia nakwa otu akara na Economics na St Petersburg Institute.
Ọ fọrọ nke nta ka ọ banye Liverpool na 2013:
N'oge okpomọkụ nke 2013, onye ọrụ Liverpool na-achịkwa Brendan Rodgers mere Mkhitaryan ka ọ bụrụ na ọ gafechara ya.
N'oge ahụ, ọ bụ onye nchịkwa ihe mgbaru ọsọ kachasị elu na Ukraine n'oge gara aga, na-atụle ihe mgbaru ọsọ 25 na egwuregwu 29 maka Shakhtar Donetsk.
Na nkwekọrịta ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na akụkọ banyere ya na-efega Anfield maka akụkọ ahụike, akụkọ ndị na-adịghị mma sochiri. Ndị Liverpool nwere obi ụtọ dị mkpụmkpụ.
Ndị ahịa Borussia Dortmund bụbu onye njikwa Jurgen Klopp gbagidere azụmahịa ahụ iji banye na atụmanya nke etiti ha bụ onye ga-eme ka ọkụ gbaa Anfield. Jurgen nyere onyinye na ọ nweghị ike ịjụ ma ọ họpụtara Signal Iduna Park dị ka ebe obibi ya n'ọdịnihu karịa Anfield.
Ị Mkhitaryan kwusiri ike na ọ bụghị ego, mana ụdị bọlbụ Dortmund na-egwuri egwu mere ka ọ nabatara onyinye Klopp.
Henrikh Mkhitaryan Biography Eziokwu - Ozugbo ya na Jose Mourinho nọrọ na nkwari akụ:
Mkhitaryan, mgbe ọ bịarutere Manchester United, nọrọ na nkwari akụ Lowry Hotel maka otu afọ. Ọ nọ ebe ahụ kpaliri ya Jose Mourinho ya na ezinụlọ ya biri n’ebe ahụ n’otu oge. N’oge ahụ, ndị otu abụọ ahụ bịara ọhụrụ n’obodo.
Echiche ịnọ na họtel tupu ịzụrụ ma ọ bụ ịgbazite ụlọ na Manchester bụ nhọrọ dị mma maka ndị bara ọgaranya na-abịa nnukwu obodo ọrụ.
Dị ka Micky si kwuo, “Jose kwuru na ya amachaghị banyere obodo ahụ n'onwe ya tupu ya abịa ebe a. Ọ gwara m ka m nọrọ na họtel ebe ọ nọrọ ”
Ma Mourinho na Mkhitaryan enwetawo ụlọ na-adịgide adịgide na northwest nke Manchester.
Eziokwu Henrikh Mkhitaryan - Q na As:
- Ndi ihe ọ bụla mara ihe ma ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị na-eme gị ebe ọ bụ na ị kwaga Manchester United? Ma eleghị anya, ụfọdụ oku na ihe ndị dị egwu?
- 'Eeh, a na m enweta ọtụtụ oku… n'aka ndị bịara abịa.'
- Gịnịkwa ka ha chọrọ?
- Ha niile chọrọ Ego! '
- Gịnị ka ị na-agwa ha?
- M na-ajụ ha. Kedu ka m ga-esi nye ego nye ndị ala ọzọ maọbụ naanị ịgbaziri? Agaghị m enweta ya.
- Ị bụ onye na-egbu egbu, ị kwenyere n'ọsọ?
- 'Ee n'ezie. Bọchị ọmụmụ mụrụ m akara aka. Dị ka onye ọ bụla, n'ezie. Ndụ bụ akwụkwọ, anyị bụ ndị na-eme ihe nkiri na-egwuri egwu dịka e dere. Ekwere m na akara zodiac. Abụ m Aquarius '